करेक्सनमा नेप्से साताको अन्तिम कारोबार आज के होला ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
करेक्सनमा नेप्से साताको अन्तिम कारोबार आज के होला ?
२०७७ चैत्र २६, बिहीबार १४:०४:००
काठमाडाैं । नेप्से परिसूचक सातको बुधबार घटेको छ । लगानीकर्ताहरुले भने यसलाइ करेक्सनको रुपमा लिन थालेका छन् । लगानीकर्ताहरुले हाइ विन्दुमा कारोबार भएकाले नेप्सेमा करेक्सन जानुलाई सामान्य मान्ने गरेका छन् । एक विश्लेषकका अनुसार नेप्से अब २४ सयकै हाराहारीमा आउने बताउँछन् ।
बुधबारको नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन भएको छ । आइतबारबाट उच्च विन्दुमा कारोबार हुदै आएको नेप्से बुधबार सामान्य करेक्सन हुन पुगेको छ । नेप्से परिसूचक २दशमलव ८५अंकले घटेर २ हजार ६ सय ७१ विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन ६ समूहको सूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै सूचक बढ्नेमा होटल तथा पर्यटन समूहको सूचक ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै दोस्रो समूहको सूचक बढ्नेमा माइक्रो फाइनान्स समूहको २ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य ४ समूहको सूचक सकारात्मक रहेको छ ।
यसदिन ७ समूहको सूचक नकारात्मक रहेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्ने समूहको सूचकमा ट्रेडिङ समूहको सूचक रहेको छ । यस समूहको सूचक ३ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको छ भने दोस्रो समूहको सूचक घट्नेमा लगानीगत समूह छन् ।
बुधबार धितोपत्र र ऋणपत्रगरी कारोबारमा आएका २ सय १५ कम्पनीको कूल १ करोड ६५ लाख कित्ता सेयर किचबेच हुँदा ७ अर्ब २६ करोड ६९ लाख रुपैंयाको कारोबार भएको छ । यस दिन सबैभन्दा धेरै कारोबार हुनेमा नेपाल इन्फ्राष्ट्रचर बैंक रहेको छ । सो बैंकले अन्तिम सेयर मूल्य ५ सय ९२ रुपैंयामा २८ करोड रुपैंयाको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै दोस्रो कारोबार हुने कम्पनीमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको अन्तिम सेयर मूल्य ६ सय ८१ रुपैंयामा २२ करोड ३३ लाख रुपैंयाको सेयर किनबेच भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेर ९ सय २५ रुपैंयाको सर्किट मूल्यमा कारोबार भएको छ । चन्द«ागिरी हिल्स ९ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेर २५ सय ७९ रुपैंयामा पुगेको छ । त्यस्तै एनआइसी एसीया लघुवित्त वित्तीयको ९ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेर १२ सय ७८ रुपैंया पुगेको छ भने रिलाइन्स फाइनान्सको ९ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेर २ सय ७९ रुपैंया पुगेको छ । त्यस्तै युनिभर्सल पावर कम्पनीको ९ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेर १ सय ८१ रुपैंया पुगेको छ । त्यस्तै बुधबारबाट दोस्रो बजार कारोबारमा आएको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ७ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेर ३ सय ८८ रुपैंया पुगेको छ ।
त्यस्तै यस दिन सबैभन्दा धेरै घट्नेमा रैरेङ हाइड्रो पावर कम्पनी ७ दशमलव २६ प्रतिशतले घटेर ३ सय ८३ रुपैंया कायम भएको छ । त्यस्तै युनाइटेड आइडी मार्दी आरबी हाइड्रो पावर ६ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर ३ सय १० रुपैंया कायम भएको छ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स ५ दशमलव २४ प्रतिशतले घटेर ७ सय ७८ रुपैंया कायम भएको छ ।
यस देशका भिखारी छन् कैसलेस, इ पेमेंट र क्यूआर कोडबाट लिन्छन्...
उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्सेमा ठुलो करेक्सन, आत्तिय लगानीकर्त...
अब मोबाइल बैंकिङ एपबाट बैंकसँग कुराकानी गर्न सकिने
उकालो लाग्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?